Lenovo Ideapad3 14ADA05 Platinum Gray (AMD Ryzen 5)-10 ~ ICT.com.mm
HomeLenovo Ideapad3 14ADA05 Platinum Gray (AMD Ryzen 5)-10
Lenovo Ideapad3 14ADA05 Platinum Gray (AMD Ryzen 5)-10
IND-IP-314ARE05-81W3002DVN Processor: AMD Ryzen54500U (6Cores / 6Threads, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) Graphics: Integrated AMD Radeon Vega6Graphics Display: 14” FHD (1920×1080) 220nits Anti-glare Memory: 8GB... [Learn more]
Brand: LenovoSKU: 168973N/ASee more: Computer Systems, Laptops / Notebooks, Lenovo, New Arrivals, ProductsFilter by: EDIT-TWO, Laptops (PC), outofstock, USD
Processor: AMD Ryzen54500U (6Cores / 6Threads, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3)
Graphics: Integrated AMD Radeon Vega6Graphics
Display: 14” FHD (1920×1080) 220nits Anti-glare
Storage: SSD 512GB PCIe NVMe
Special Features: 11ac, 2×2 + Bluetooth™5.0,
Weight: 1.60 KG.
ဂရပ်ဖစ်ကတ်အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ Performance ကောင်းမွန်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး၊ ရုံးသုံး Laptop ကောင်းကောင်းတစ်လုံးရှာနေတယ်ဆိုရင် ဒီ Lenovo Ideapad3Laptop ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒီ Laptop လေးမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ AMD Ryzen54500U Processor က ပုံမှန် CPU အမြန်နှုန်း 2.3 GHz ရှိပြီး Turbo အနေအထားမှာ 4.0 GHz အထိရရှိနိုင်တဲ့ CPU ကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်တစ်ကိုယ်ရည်သုံး၊ ရုံးသုံး ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို သွက်သွက်လက်လက် အသုံးပြုနိုင်အောင် မောင်းနှင်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြန်ဆန်မှုပိုင်းမှာ Intel Core i7 (8559U/8th Gen) Processor နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် 4% ပဲ ကွာခြားတဲ့ အမိုက်စား CPU ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် 14" မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး Full HD Resolution ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ Anti-Glare နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုနေရာမှာပဲသုံးသုံး အလင်းပြန်မှာကို စိုးရိမ်နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ပါးလွှာတဲ့ဘေးဘောင်မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းဖြစ်တာကြောင့် ကျစ်လျစ်တဲ့ကိုယ်ထည်မှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့မြင်ကွင်းကို ရရှိစေမှာပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို တပြိုင်နက် အသုံးပြုနိုင်ဖို့နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် ပြီးမြောက်စေဖို့အတွက် RAM 8GB ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
ဂရပ်ဖစ်အတွက်ကိုတော့ ပုံမှန်ရုံးသုံးဆော့ဖ်ဝဲတွေအားလုံးကို အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ AMD Radeon Vega6Graphic ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့အတွက် HDD ထက် အဆပေါင်းများစွာပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး အသံဆူညံမှုမရှိသလို အကြမ်းလည်းခံတဲ့ SSD 512GB ကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် Windows နဲ့ Softwares ဖွင့်ချိန်က စက္ကန့်ပိုင်းပဲ ကြာမြင့်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ OS ထည့်သွင်းပေးမထားတဲ့အတွက် မိမိအသုံးပြုမှုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Windows, Linux, Ubuntu စတဲ့ OS တစ်မျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Web ကင်မရာက “HD” ဖြစ်တဲ့အတွက် Work From Home လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေနဲ့ Online Learning ပြုလုပ်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် လုံးဝအဆင်ပြေစေမဲ့ ရုပ်ထွက်ကြည်လင်တဲ့ Web ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ လှပသပ်ရပ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ 'Platinum Gray' အရောင်နဲ့ ‘Business Black’ အရောင်တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အာမခံတစ်နှစ် ပေးထားပါတယ်။
Nothings worse than buying an entry-level laptop and having to replace it when you pick upanew hobby or skill that requires better performance. The IdeaPad314” AMD is designed to keep you in that entry-level price point. With Ryzen™ R5 processing this laptop will keep up with you as your needs evolve.
Withaspacious 17″ display with HD+ resolution, you can catch all the fine details in your favorite photographs and streaming videos. You can take those visuals to the next level with AMD Radeon™ graphics. Narrow bezels give itasleek and borderless look, providing you more screen to look at. With Dolby Audio™ sound, you’ll love what you hear as well as see.
Command your privacy
How creepy is it that hackers can watch your life by breaking into your webcam? With our physical privacy shutter, the IdeaPad will keep those prying eyes out of your life so you can enjoy your screen time safely, with the people you want to share it with. With the fingerprint reader power button, your laptop won't even wake up unless you're the one trying to do it.